Volcano Teneguía na mgbawa na La Palma: ihe niile ịchọrọ ịma | Meteorology netwọkụ
Ugwu mgbawa Teneguía na mgbawa na La Palma
Portillo nke German | 20/09/2021 14:46 | Geology
El Ugwu mgbawa Teneguía nke dị n'agwaetiti La Palma na agwaetiti Canary, ọ gbawara na Sọnde, Septemba 19, 2021 n'elekere 15:12 nke abalị. Kemgbe ahụ, ụlọ mgbasa ozi niile na -elezi anya n'ihe nwere ike ime. Ọ bụ otu n'ime ntiwapụ akụkọ ihe mere eme dịka nke mere na agwaetiti mgbawa a na ọ bụ ya ka a ga -ekwukarị na ya n'afọ ndị na -abịanụ.
N'edemede a, anyị ga -agwa gị ihe bụ ihe na -ebute na nsonaazụ nke ugwu mgbawa Teneguía, njirimara ya na ịgbagha ụfọdụ adịgboroja.
1 Mbibi nke ugwu mgbawa Teneguía
2 Mgbochi na amụma nke mgbawa
3 Nkọwapụta na ụgha nke ugwu mgbawa Teneguía
Mbibi nke ugwu mgbawa Teneguía
Mgbawa El Hierro mere ihe dị ka afọ iri gara aga, na mgbawa a nwere njiri mara nke ọma na mgbawa ndị ọzọ mere na agwaetiti ndị a. Mgbawa nke ugwu mgbawa Teneguía ọ bụ ụdị strombolian ọ na -amalite site na mgbaji ọkpụkpụ na site na mfu nke lava, pyroclasts na gas. Ọkpụkpụ ahụ na -adịkarị site n'izu ole na ole ruo ọnwa ole na ole.
Anyị ga -ahụrịrị ihe kpatara mgbawa ahụ na nchịkọta magma na ala ụlọ mgbawa na La Palma (6 ruo 8 omimi). Magma na -esite n'uwe mwụda wee mepụta ya na mpaghara ọzọ anyị na -akpọ asthenosphere. Ọ dị omimi iri puku kilomita. Na mpaghara a, nrụgide na ọnọdụ okpomọkụ na -enye ohere ka okwute ndị ahụ dị ebe ahụ gbazee, na -emepụta magma. Njupụta nke mmiri mmiri mejupụtara silicate nke nwere irighiri okwute, kristal kwụsịtụrụ na gas etisasịworo dị ala karịa njupụta nke okwute gbara ya gburugburu.
N'iburu n'uche ọdịiche dị na njupụta na okwute mechiri emechi, mgbe magma na -agbakọba na oke, ọ ga -eji mgbawa dị n'oké nkume ma ọ bụ mgbawa nke magma n'onwe ya nwere ike mepụta (n'ihi mkpọtụ) iji rịgoro na mpaghara na -emighị emi.. N'ihi ya, na -ebili na nrụgide dị ala na ọkwa okpomọkụ, na nwedịrị ike gbakọba n'ogo dị n'etiti na kọntaktị n'etiti nkume nke ọdịdị dị iche iche. Mgbe magma na -ewuli elu nke ukwuu, ọ na -eji mgbawa dị n'oké nkume ahụ ebili ruo ebe na -emighị emi.
Mgbochi na amụma nke mgbawa
Mpaghara mkpokọta ndị a, nke anyị na -akpọ ọdọ mmiri magma ma ọ bụ ime ụlọ magma, na -enye ohere ka mmiri miri emi gbakọta n'akụkụ, nke na -ebute oke nrụgide ma na -agbarụ ma gbajie okwute ndị gbara ya gburugburu. Nke a na -atụgharị ka ọ bụrụ mmụba nke ọrụ seismic na nrụrụ ala dị ka ihe nlele ọkụ mgbawa si atụ. N'otu aka ahụ, mgbe mgbape mepere, a na -ewepụta gas site na magma, otu ngwa ndị a na -edekwa otu gas ndị a. Nke a bụ ka anyị si mara na ugwu mgbawa na -akwado maka mgbawa ọhụrụ.
N'ezie, a bịa na mgbawa ugwu mgbawa La Palma, usoro mgbawa ahụ malitere na Septemba 11, ọrụ seismic na deformation ala na -arịwanye elu nke ukwuu na anwuru ọkụ gas ka na -adị ruo taa. Nke a na -enye gị ohere ibu amụma mgbawa ma were ihe ndị dị mkpa iji gbochie ma belata ihe egwu nwere ike ime.
Mgbawa nke na -emepe emepe agaghị agụnye ihe egwu metụtara ọnọdụ ebe mmiri na -asọba, nke ọdịdị ala na -achịkwa ya kpamkpam, iberibe mgbawa na -agbakọta gburugburu mgbawa ahụ, na -emesịa mepụta akụkụ mgbawa nke ya na ya. Gasi mgbawa, dị ka ihe ndị sitere na sọlfọ ma ọ bụ carbon dioxide n'onwe ya, ha dịkwa, a ga -atụlekwa ha n'ihi ihe egwu dị na ya, n'agbanyeghị na amachibidoro ha n'otu mpaghara dịka ngwaahịa ndị gara aga.
Ogologo oge mgbawa ahụ na -adabere n'ụdị magma nke enwere ike ịpụta n'èzí, nke na -ekpebi oke nrụgide sitere na ya. ụlọ magma wee kwụsị mgbawa ahụ mgbe ebigharịrị oke nrụgide na gburugburu ya. Mgbawa ndị gara aga yiri mgbawa nke ugbu a, na -adịte aka n'izu ole na ole ruo ọnwa ole na ole.
Nkọwapụta na ụgha nke ugwu mgbawa Teneguía
O doro anya na ọtụtụ n'ime ihe omume ndị a chọrọ ihe ọmụma banyere ọdịbendị bụ isi gbasara ya. Ọnụ ọgụgụ akụkọ buru ibu ewepụtala ozi ụgha nke a ga -agọnarị. Ka anyị hụ ndị bụ isi:
Nzere na okpomoku zuru ụwa ọnụ: ụfọdụ na -eche na mgbawa nke ugwu mgbawa a metụtara okpomoku zuru ụwa ọnụ. Okpomoku nke uwa enweghi ihe jikọrọ ya na mgbawa a. Ọ bụ agwa ugwu mgbawa nke agwaetiti a na mmalite ya kpatara ya. Ọ bụ ihe nkịtị n'ihi ọnọdụ ala ya.
Ọ kpatara oke mbufịt na Brazil: Nke a bụ akụkụ ọzọ nke hoaxes. Mgbawa a emebeghị ka ọ bụrụ ụdị ebili mmiri ọ bụla.
A ga -arụ ọrụ Teide: Ihe ọzọ na -eduhie eduhie na -agagharị na netwọkụ bụ na ugwu mgbawa a ga -eme ka ugwu Teide rụọ ọrụ. Enweghị ihe akaebe ọ bụla. Emeela ntuli aka na nso nso a na ugwu Teide agbabeghị n'ihi ya. Ma ọ bụ na ọtụtụ sistemụ mgbawa ejikọghị onwe ha.
Enweghị ike iji lases gụchaa Lava: Ọ bụ ezie na ọ dị ka ihe doro anya, a ka nwere ndị kwenyere na ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ nwere ike wepu mmiri mmiri ha.
Enwere ike ibu amụma mgbawa ugwu mgbawa: mgbawa ugwu mgbawa dị mfe ịkọ karịa ala ọma jijiji. Ma ọ bụ na ha na -adọ aka na ntị mgbe niile site na obere mgbanwe na mbara ala ma ọ bụ jiri obere ala ọma jijiji. Ha nwekwara ike iji anwụrụ ọkụ na mgbaama ndị ọzọ adọ aka na ntị. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ na -esiri ike ikpebi kpọmkwem ụbọchị na oge oke ugwu mgbawa ga -ahọrọ.
Ịkwụsị okporo ụzọ ikuku: ọ bụ ihe ndị mmadụ na -eche. Mgbawa ụfọdụ na -awụpụ ntụ ugwu mgbawa ọtụtụ kilomita n'ime ikuku, na -edugakarị na mmechi nke ikuku. N'ihe gbasara ntuliaka a, o yighị ka ọ ga -ebute imechi ikuku ọ bụla ebe ọ bụ na kọlụm anwụrụ ọkụ adịchaghị ka nke ugwu mgbawa ndị ọzọ.
Enwere m olile anya na site na ozi a ị nwere ike mụtakwuo gbasara Teneguía ugwu mgbawa, ihe njiri mara ya ma gbaghasị ụfọdụ akụkọ ụgha na -agagharị na netwọkụ mmekọrịta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Ugwu mgbawa Teneguía na mgbawa na La Palma
Gịnị bụ snow